Maamulka Gaalkacyo oo bilabay olole lagu dayactirayo wadadooyinka magaalada (SAWIRRO). • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Maamulka Gaalkacyo oo bilabay olole lagu dayactirayo wadadooyinka magaalada (SAWIRRO).
Maamulka Gaalkacyo oo bilabay olole lagu dayactirayo wadadooyinka magaalada (SAWIRRO).
June 12, 2018 - By: Mohamed Dahir
Galkacyo:- Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug waxaa ka socda olole lagu dardargelinayo dayactirka wadada weyn ee laamiga ah ee dhexmarta magaalada ,iyadoo ay barbar socdaan dhismaha wadooyin kale ee cusub,madaa uu burur xoogani ku dhacay jidka oo mudo hore la dhisay aanna heli dayactir.
Maxamuud Yaasiin Tumey Duqa Magaaladda Galkacyo ayaa sheegay in dhismaha iyo dayactirka wadadu tahay qorshe ay iska kaashanayaan dowladda hoose & bulshada ganacsatada ah ee magaaladda,iyadoo lagu dhisi doono dhaqaalaha maxaliga ah oo aanay jirin lacag banaanka ka timid ,taasina ay qayb ka tahay hanaanka iskaashi ee Maamulka & Bulshada Gobolka.
Maamulka degmadda ayaa howlgaliyey shirkado maxali ah iyo kuwo shisheeye oo ka howlgelidoona wax ka qabashadda dhibka ka muuqda wadada,waxaana toos u bilowdaya qiimaynta lagu ogaanayo sida ay wax u qabto wadadu iyo meelaha u baahan dayactirka.
Dhawaan ayaa lagu wadaa in la horgeliyo dhismaha & dayactirka wadada weyn iyo jidad cusub oo maamulka degmadu qorsheyeen in laga dhiso xafadaha magaalada,kuwasoo dhamaan lagu dhisayo habka isku tashiga Maamul iyo dadweynaba.